Febraayo 2020: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah | Laga soo bilaabo Linux
Febraayo 2020: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Maanta, bishii labaad ee sanadka ayaa dhammaatay, Febraayo 2020, iyo in badan ayaa loo daabacay sida wararka, casharrada, buugaagta, hagayaasha, ama macluumaadka khuseeya ama la iftiimiyay ee ku saabsan «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux», labadaba Laga soo bilaabo Linux sida kuwa kale Internet The.
Laakiin, adoo tixraacaya shaqooyinka bishaan, Febraayo 2020, oo dhamaanaysa, sidii caadada inoo ahayd, waxaan soo bandhigi doonaa dib u eegida macluumaadka muhiim ah ama aan fiicnayn, aad u badan wanaagsan sida xun, mudan xusuusnow ama muuji, si loo bixiyo a hadhuudh yar oo waxtar leh qof walba
Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa in soo koobiddani ay socoto wanaagsan, xun iyo xiisaha, gudaha iyo dibedda baloogga «DesdeLinux» Aad ayey faa'iido u leedahay inaad si joogto ah ugala socoto daabacaadahayada, iyo mowduucyada kale ee la xiriira «Informática y la Computación», iyo «Actualidad tecnológica».
1 Soo Koobidda Febraayo 2020
1.1 Gudaha FromLinux
1.1.3 Xiisaha leh
1.1.4 Meelaha kale ee lagu taliyay ee bisha
1.2 Ka baxsan Linux
Soo Koobidda Febraayo 2020
Ku tax liistada ugu horreysa ee xasilloonida 'Trident OS' oo ku saleysan 'Void Linux': Bil ka dib markii la sii daayay nooca beta, horumariyeyaasha Trident waxay ku dhawaaqeen warka sii deynta nooca xasilloon ee Triden 20.02 kaas oo lagu soo bandhigayo shaqadii ugu dambeysay ee wareejinta FreeBSD iyo TrueOS salka xirmada Void. Linux.
Casharrada Cilmiga Degaanka ee DEBIAN Desktop-ka waa la dhammaystiray: Wuxuu ka bilaabmay Janaayo GNOME, KDE Plasma y XFCE, ku darista kuwa Qoraxda, MATE, Lxde y LXQT.
Blizzard hadda wuxuu sheeganayaa inuu sheeganayo xuquuqda lahaanshaha cinwaankeeda: Blizzard Entertainment ayaa go aansatay in ay talaabo mar kale ka qaado arinta xuquuqda ciyaarteeda iyo waxyaabaha ka dhalan kara (mods), iyadoo ku dhawaaqeysa inay dooneyso inay hubiso inay hada yeelaneyso dhamaan xuquuqaha kale ee ciyaaraha kale ee laga soo qaatay wax ka badalka cinwaanadooda.
Ka taxaddar haddii aad lacag ku bixiso Google Pay adoo adeegsanaya lacagahaaga Paypal: Dad badan ayaa bilaabay in ay soo sheegaan in ay ku ogaadeen lacag bixin aan la ogoleyn akoonkooda PayPal meelo kala duwan, sida fagaarayaasha PayPal ama Twitter, kuwaas oo dhamaan warbixinada ay wadaagaan ay dhamaantood u isticmaaleen is dhex galka Google Payage iyo PayPal.
OpenWifi, waa mashruuc il furan oo lagu fulinayo Wi-Fi oo ku saleysan FPGA iyo SDR: Intii lagu gudajiray shirkii FOSDEM 2020 shirkii ugu horeeyay ee ilo furan ee OpenWifi "Wi-Fi 802.11 a / g / n" qaab dhismeedka duub buuxa iyo qaab barnaamij ahaan lagu qeexay (SDR, Software Raadiye la qeexay) iyo FPGA.
Raspberry Pi 4: shirkad Isbaanish ah ayaa ka shaqeysa inay keento Vulkan: Kuwa haysta Raspberry Pi 4 SBC nasiib ayey leeyihiin, maadaama shirkad Isbaanish ah oo la yiraahdo Igalia ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay u keeni lahayd qalabkan Vulkan graphics API sidoo kale. Vulkan waxaad kula shaqeyn laheyd awood badan iyo nidaam casri ah barnaamijkaan xisaabinta Ingiriiska.
Fursadaha ugu waxtarka badan uguna xiisaha badan ee loogu talagalay codsiyada cayaaraha GNU / Linux ayaa la baaray: Wax ka qabashada codsiyada caanka ah gamehub, Itch.io, Lutris y Steam, si loo muujiyo in xilligan GNU / Linux uu yahay Nidaam Hawleed aad u fiican oo loogu talagalay Gamers oo leh heer aad ugu dhow midka Windows iyo MacOS.
Meelaha kale ee lagu taliyay ee bisha
Codsiyada dirista Kalfadhiga y deltachat: Beddelka xiisaha leh ee WhatsApp.
FSF waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto koodhka martigelinta iyo wada shaqeynta
Ka baxsan Linux
android-x86 9.0-r1: Mashruuca Android-x86 wuxuu ku faraxsan yahay inuu ogeysiiyo sii-deynta nooca 9.0-r1 dadweynaha. Kani waa noocii ugu horreeyay ee xasilloon ee loogu talagalay Android-x86 9.0 (pie-x86). Nooca 9.0-r1 wuxuu ku saleysan yahay nooca ugu dambeeyay ee Android 9.0.0 Pie (android-9.0.0_r53).
Linux Mint 4 Beta (LMDE): Kooxda Linux Mint waxay ku dhawaaqeen helitaanka nooc beta cusub oo ah DEBIAN Edition ee ay Distro. LMDE waa barxad bixisa baakado iyo tikniyoolajiyad gaar u ah Linux Mint iyadoo adeegsanaysa qaybinta 'DEBIAN' saldhig ahaan, si loogu bixiyo isla waayo-aragnimo isticmaale oo ka duwan tii Ubuntu, si looga hortago shaqo dheeri ah haddii Ubuntu meesha ka baxdo, iyo in la hubiyo in software-ka ay soo saaraan ayaa la jaan qaadi kara meel ka baxsan Ubuntu.
ManjaroLinux 19.0: Nooca ugu dambeeyay ee xasilloon ee qaybinta asalka ah ee Arch Linux Manjaro Linux, oo loo yaqaan 'Kyria', ayaa la sii daayay. Daabacaaddeeda XFCE waxay ku bixisaa khibrad wacan, isku dhafan iyo avant-garde oo ku saabsan Deegaanka Desktop. Sidoo kale, waxay la timid mawduuc cusub oo loo yaqaan 'Matcha'. Daabacaaddeeda KDE Plasma waxay siisaa jawi desktop xoog leh, qaan-gaadh ah oo hodan ah muuqaal muuqaal gaar ah leh, gebi ahaanba dib loo qaabeeyey.
Sii deynta kale ee xiisaha leh ee bisha: IPFire 2.25 Muhiim 141, netrunner 20.01, GoboLinux 017, NG Firewall 15.0, Noole 3.8.4, MX Linux 19.1, Q4OS 4, NetBSD 9.0, Mashruuca Trident 20.02, Ubuntu 18.04.4 LTS, Dabo 4.3, Xaraashka 2020.02, Koore yar oo Linux ah 11.0, Raspbian 2020-02-05, hoose OS 5.1.2, Simplicity Linux 20.1, NetBSD 9.0 RC1 iyo FurMandriva Lx 4.1.
Sida caadiga ah, waxaan rajeyneynaa tan "soo koobid yar" leh kuwa ugu fiican gudaha iyo dibedda baloogga «DesdeLinux» loogu talagalay bisha «febrero» laga bilaabo sanadka 2020, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta weyn ee baahinta nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo koraya ee codsiyada iyo wixii loogu talagalay «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Febraayo 2020: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Aad baad ugu mahadsan tihiin daabacaadda noocan ah iyo dadaalka ay u baahan tahay, waxaan rajeynayaa inay sidan ku sii socdaan, runta ma haysto wax badan oo aan faallo ka bixiyo maaddaama aan ka warwareegayo mowduucyo dhowr ah oo ay la macaamilayaan, sababo la xiriira sii deynta Manjaro, tareenkaasi wuxuu umuuqdaa qofna jooji, Salaan.
Jawaab Ivan Palomino
Salaan Ivan! Waad ku mahadsantahay faalladaada wanaagsan ...
KaOS 2020.02 waxay timid Plasma 5.18 LTS, Linux 5.5 iyo in ka badan